I-China Aluminium Nut, Injection Molded Aluminium Nut, Aluminium Barrel Nut Exporters
Inkcazo:I-aluminium Nut,I-Aluminium Blind Rivet Nut,Inaliti Molded Aluminium Nut,IAluminiyam Ibhloko yeNut,,
Home > Imveliso > Amandongomane aChongiweyo > I-aluminium Nut
Iintlobo zeMveliso ze- I-aluminium Nut , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-aluminium Nut , I-Aluminium Blind Rivet Nut ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umbala ogcweleyo we-aluminium nut yokuzikhiya ngokwakho
Umbala we-aluminium onemibala enesitshixo se-flang self-lock
Ukuchaneka okuphezulu kwe-aluminium alloy self-lock nut
i-serange ye-flange yokutshixa i-jam nut aluminium
i-aluminium alloy nylon inyango yokuzitshixela ngokwakho
Umbala we-nylon onemibala etshixwayo kunye ne-flang
I-Hexagon enkulu yokuzitshixa encinci yesitshixo se-flange nuts
I-Wholesale Drone fasteners self itshixayo aluminium nut
I-Aluminium yesiqhelo yokuCoca ngaphakathi kwi-Thread Nylon eSerrated Nut
Iindidi zeCallange eziGcweleyo eziBandisiweyo zeCallange eziShenxisiweyo zeAluminiyam
Iindlela eziphakamileyo zoKhuseleko lweNqanaba eliPhakamileyo lweNqanaba leNylon lithunyelwe
IQhosha leMetriki yeAluminiyam ejikelezwe ngokweMoto
I-OEM yeFektri yexabiso iAluminiyam i-Anodised Iqhosha leFlange Flange
I-M4 aluminium cinezela kwi-FPV hardwares Hobbycarbon
I-Ebay M3 aluminium cinezela i-nut ngemibala eyahlukeneyo
I-M3 i-aluminium icinezela isinongo sekhabhoni yecarbon fone
I-aluminium cinezela i-Hobbycarbon
I-Drone fastener M5 itshixo yeentlobo zezityalo ezi-fange zirhangxiwe
discription mveliso: Umbala ogcweleyo we-aluminium nut yokuzikhiya ngokwakho I- luminum Nut ene-flange iya kuthatha indawo entsha yabenzi
Umbala we-aluminium onemibala enesitshixo se-flang self-lock Igama lemveliso: Ukuchaneka okuphezulu kwe-aluminium alloy self-lock lock Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo: I- Hexagonal Nylon Nut , i- Aluminium...
Ukuchaneka okuphezulu kwe-aluminium alloy self-lock nut Igama lemveliso: Ukuchaneka okuphezulu kwe-aluminium alloy self-lock lock Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo:
Igama lemveliso : Ukuhanjiswa kweefandesi zokutshixa kweefandesi zerhasi jam nati Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo: I-Hexagonal Nylon Nut, i-Aluminium Barrel Nut, i-Aluminium Blind Rivet Nut, Amantloko...
Igama lemveliso: i- aluminium alloy nylon self-locking nut Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo: I-Hexagonal Nylon Nut, i-Aluminium Barrel Nut, i-Aluminium Blind Rivet Nut, Amantloko e-Hexagonal, Amanqindi Inzuzo:...
Ingcaciso yeMveliso IColoful Self Lock Aluminium Hex Nut eneFlange I-aluminium nati ene-flange iya kuthatha indawo entsha yabenzi bezomatshini kunye nezomatshini wokuqinisa, lolunye uhlobo lokuqina kwealuminium. Isetyenziswe ngokubanzi kwizixhobo...
Ingcaciso yeMveliso IAluminiyam yeAlloydange Flange etyiweyo yesiTshixo seZitshixo Iialuminium zeAluminiyam zilungele izixhobo zedrone, ezenza ukuba i-drone ibonakale intle kakhulu. Ngama-nuts sinamantla amaninzi
Ingcaciso yeMveliso IColoful Self Lock Aluminium Hex Nut eneFlange Intshayelelo yeMveliso I-aluminium nati kunye ne-flange iya kuthatha indawo enhle yabenzi bezomsebenzi kunye nezokwakha, lolunye uhlobo lokuqina kwealuminium. Isetyenziswe ngokubanzi...
Ingcaciso yeMveliso Prepision isiko elineengcingo zombane ezinama-fasteners auto Intshayelelo yeMveliso I-aluminium Fasteners ibandakanya i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated
Ingcaciso yeMveliso I-Hexagon enkulu yokuzitshixa encinci yesitshixo se-flange nuts Iialuminium zeAluminiyam zilungele izixhobo zedrone, ezenza ukuba i-drone ibonakale intle
Ingcaciso yeMveliso I-Wholesale Drone fasteners self itshixayo aluminium nut Iialuminium zeAluminiyam zilungele izixhobo zedrone, ezenza ukuba i-drone ibonakale intle kakhulu. Ngama-nuts sinamantla amaninzi
I-Aluminium yesiqhelo yokuCoca ngaphakathi kwi-Thread Nylon eSerrated Nut Intshayelelo yeMveliso I-lock ye-DisC-LOCK yenziwa ngamacandelo amabini. Inxalenye nganye ine cam eyomileyo. Kuba i-angle yangaphakathi yoyilo loyilo lomda inkulu inkulu...
Iindidi zeCallange eziGcweleyo eziBandisiweyo zeCallange eziShenxisiweyo zeAluminiyam Intshayelelo yeMveliso I-nati ene-welded yesikwere, i-hex e-welded, isantya sokutya, i-nut ejikelezwe ngaphakathi Umtya ojikelezayo nge-groove, ijikeleze umngxunya...
Iindlela eziphakamileyo zoKhuseleko lweNqanaba eliPhakamileyo lweNqanaba leNylon lithunyelwe Intshayelelo yeMveliso Intle-izinyo zonke zensimbi ye-hex flange yokutshixa, yonke isinyithi yentsimbi ye-hex ye-flange yokutshixa, intle engafakwanga...
IQhosha leMetriki yeAluminiyam ejikelezwe ngokweMoto Intshayelelo yeMveliso Ukuzivalela okwezitshixo, isiciko seengcango, itsheyisi yokuvala, Isikhuseli ukhuseleko lwe-nati, isiciko sokudibanisa intonga esincinci, ukuzikhiya kwe-hex cap nut,...
I-OEM yeFektri yexabiso iAluminiyam i-Anodised iqhosha leFlange Flange Intshayelelo yeMveliso I-nut yinxalenye yokudibanisa ngokuqinileyo izixhobo zokusebenza. I-nut yokubalula okufanayo inokuxhunywa ngentambo yangaphakathi. Umzekelo, i-nut...
I-M4 aluminium cinezela kwi-FPV hardwares Hobbycarbon Intshayelelo yeMveliso I-aluminium Fasteners ibandakanya i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. I-M2.5 i-aluminium ye-aluminium...
I-Ebay M3 aluminium cinezela i-nut ngemibala eyahlukeneyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium Fasteners ibandakanya i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. I-M2.5 i-aluminium...
I-M3 i-aluminium icinezela isinongo sekhabhoni yecarbon fone Intshayelelo yeMveliso I-aluminium Fasteners ibandakanya i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. I-M2.5 i-aluminium...
I-aluminium cinezela i-Hobbycarbon Intshayelelo yeMveliso I-aluminium Fasteners ibandakanya i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. I-M2.5 i-aluminium ye-aluminium yeeklati ngokubanzi...
I-Drone fastener M5 itshixo yeentlobo zezityalo ezi-fange zirhangxiwe Intshayelelo yeMveliso I-aluminium Fasteners ibandakanya i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. I-M2.5...
KwiChina I-aluminium Nut Abaxhasi
Isithombiso esingezantsi sibonisa ii-aluminium zethu zokuzikhusela. Mnyama, bomvu, luhlaza, bumfusa, pinki, luhlaza, isilivere ,orenji kunye nombala wegolide yimibala yethu edumileyo. I-aluminium Flange zokutshixa iitshiphu, ii-aluminium Flange zokutshixa zesitshixo, ii-aluminium ezizitshixayo zokuzikhusela, amantla e-aluminium hex njl. Kodwa ubungakanani ezahlukeneyo kunye nemibala zinokwenziwa zenziwe ngokwezixhobo zakho okanye iimfuno zakho. Zombini ezingama-6061-T6 i-aluminium zokutshixa ii-aluminium zokutshixa kunye ne-7075-T6 aluminium yokutshixa iilinki inokunikwa. Ukuba ufuna inkonzo yokupakisha okhethekileyo nge-washers ze-nylon kubandakanya iibhokisi ezikhethekileyo zephakheji, kukulungele nathi. Nawuphi na umbuzo okanye imfuno, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-aluminium Nut I-Aluminium Blind Rivet Nut Inaliti Molded Aluminium Nut IAluminiyam Ibhloko yeNut I-M6 Aluminium Nut